सुन्तला खेतीमा रु. ३० करोड आम्दानी -GoodNews24 – Good News24
Home/अन्य/सुन्तला खेतीमा रु. ३० करोड आम्दानी -GoodNews24
भाेजपुर । यस वर्ष सुन्तला बिक्रीबाट रु ३० करोड बढी रकम भोजपुरमा भित्रिएको छ । उत्पादित चार हजार ७०६ मेट्रिक टन सुन्तला बिक्रीबाट सो बराबरको आम्दानी भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
सामुदायिक घाँसखेतीले फस्टायो पशुपालन-GoodNews24